Maalinta: Ogast 13, 2019
Dalxiiska Babadağ ee Duulista Cable Car
Ciyaaraha Fethiye-Babadağ Air Center iyo Madadaalada, oo ah mid ka mid ah xarumaha ugu caansan ee adduunka laga hirgaliyo, ayaa la hawl gelin doonaa dhamaadka sanadka soo socda. Fethiye-Babadağ Ciyaaraha Hawada iyo Madadaalada oo ka mid ah xarumaha ugu caansan ee adduunka ka dhaca [More ...]
Golaha Dawlada Hoose ee Magaalada Ankara waxay go’aamisay khidmada fiisaha ee Ankarakart, oo loo adeegsado lacag la’aan ama dhimis gaadiidka dadweynaha, sanadka 2020. [More ...]
Duqa Magaalada Caasimadda Istanbul Ekrem İmamoğlu wuxuu booqday goobta dhismaha Be siteiktaş ee Kabata Mahmutbey metro khadka dhismaha. Ekrem İmamoğlu, Duqa Magaalada Istanbul (İBB), wuxuu yidhi Kabataş - [More ...]
Konya iyo Mashaariicda Ganacsiga Dunida ee BTSO ee la Baajiyay
Bursa Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha (BCCI) lahaa tusaale ahaan dosab't halkaas oo mashaariicda la fuliyo dunida ganacsi ku wadda inay model ah Turkey. Wakiilo ganacsi oo ka socda Kayseri iyo Konya ayaa imanaya Bursa [More ...]
Bayramay Marmaray Lacag Bixisay, Lacag Bilaash Ah! Sabab?
Khadadka Hacıosman-Yenikapı, oo ka mid ah labada tareen ee muhiimka ah ee Istanbul, waa lacag la’aan inta lagu gudajiro xafladda lacagtana waxaa lagu bixiyaa Marmaray. Sababta ayaa ah in howlgalka Marmaray uu ku lifaaqan yahay wasaaradda. Si kale haddii loo dhigo, qof aan bixinin ilaa Yenikap pay isagoo qaadanaya metro HalkalıKu wareejinta [More ...]
Istanbul-Izmir wayn oo Toll Route iyo Kharashka Mashruuca: Ujeedadu waxay ahayd baxay in mid ka mid ah mashruuca jid muhiim ugu Turkiga. Marmara iyo Aegean ayaa hadda sii dhowaan doona. Istanbul illaa Izmir, 9 saacadood [More ...]
Maanta taariikhda 13 August 1993 TCDD Museum iyo Art Gallery ayaa laga furay İzmir.